Long March and Hunger Strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi: မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၅၄ ရက်မြောက်နေ့ 54th day of 900 miles for Long March
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၅၄ ရက်မြောက်နေ့ 54th day of 900 miles for Long March
(၅၄) ရက်မြောက်နေ့ (ဇူလိုင်လ ၂၈၊ ၂ဝဝ၉)
Ithaca မြို့ ခံများနှင့် အခမ်းအနားအပြီး အမှတ်တရ
နံနက် (၉) နာရီ (၁၅) တွင် Taughnnock ရေတံခွန်နှင့် မဝေးလှသော နေရာမှ စတင်ချီတက်သည်။ လမ်းသည် တောအတိဖြစ်ပါ၏။ စိမ့်ကြီးမြိုင်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ မနက်ခင်းနေခြည်သည် တောတောင်တို့အပေါ် လှပစွာကျရောက်နေသည်။ ငှက်ကလေးများမြည်နေ၏။ သာယာသောနေ့သစ်တနေ့ဖြစ်ပါသည်။ တောင်စောင်း လျှိုမြောင် ချိုင့်ဝှမ်းတို့တွင် Conifer တောသည် မုတ်သုံတော၏ အသွင်ကိုဆောင်၏။ စိမ်းစိုလန်းဆန်း၏။ ညိုမှောင်နေ၏။ နေမခသောတောခြေရှိ၏။
တောင်ကုန်းမှဆင်းလျှင် လွင်ပြင်တခုသို့ ချက်ချင်းလက်ငင်းရောက်သွား၏။ အပန်းဖြေစခန်းများ၏ အဝဖြစ်ပါသည်။ လမ်း၏ လက်ဝဲဘက်တွင် လက်ချောင်းအိုင်များထဲက တခုဖြစ်သော Cayuga ရေပြာအိုင်ကြီးသည် ကပတိတည်တည်ကြည်ကြည်ရှိ၏။ သမာဓိကိုဆောင်၍ ရေကသိုဏ်းရှုနေသည်။
စက်ဘီးသမားတချို့ကို တွေ့ရသည်။ နှုတ်ဆက်အားပေးကြ၏။ အပန်းဖြေစခန်းနယ်မြေကို လွန်သော် တောင်ကုန်းတခုကို တက်ပြန်၏။ ကြိုကြားကြိုကြား ဖြတ်သွားသောကားများ၊ စက်ဘီးများမှ နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ဆိုင်ကယ်တပ် တတပ်ကို တွေ့ရသည်။ လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြ၏။
တောလမ်းသည် တောလမ်းအတိုင်းဖြစ်၏။ တောအုပ်အတွင်းတွင် အိမ်လေးများကို ဟိုနားသည်နား တွေ့ရသည်။ တချို့အိမ်များတွင် မီးဆိုက်ရန် ထင်းရောင်းနေသည်။ အေးအေးငြိမ်းငြိမ်းသဘောကို တွေ့ရသည်။ ဆူညံရှုပ်ထွေးလှသော မြို့ပြကို စွန့်ခွာ၍ ဤတောဤတောင်တွင် လာရောက်နေထိုင်ကြ၏။ တောနှင့်တောင်စွယ်တွင် မောင်မယ်နှစ်ဖော်သည် ဤနည်းဖြင့် ဘဝကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကုန်လွန်စေသည်လော။ မငတ်မွတ်သော၊ မဆင်းရဲသော၊ သောင်းကျန်းမထကြွနေသော တိုင်းပြည်ဖြစ်၏။
စည်းရိုးတခုအတွင်းမှ အဖိုးကြီးတဦးထွက်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ခရီးရှည်အဖွဲ့ကို စူးစမ်းမေးမြန်းသည်။ လက်ကမ်းစာစောင်ကို ဝေလိုက်ပါ၏။ ဆက်လက်ချီတက်ပြီး တနေရာရောက်လျှင် အထက်ပါနည်းအတိုင်း အိမ်တအိမ်မှ အဖိုးကြီးတဦးကို တွေ့ပြန်သည်။ လူတို့နှင့် ကင်းကွာစွာနေသော ဤတောအရပ်တွင် အဘယ်သူတို့သည် လာရောက်ကျူးကျော်နေသနည်းဟု စုံစမ်းလိုဟန်တူသည်။
စတင်ချီတက်ပြီး (၁) နာရီလျှောက်မိလျှင် တောအုပ်တခုတွင် ခဏနားကြသည်။ ဆက်လက်ချီတက်၏။ (၁ဝ) နာရီ၊ မိနစ် (၄ဝ) တွင် Cayuga Nature Center သို့ ရောက်ရှိသည်။ ရှည်ရှည်မျောမျောရှိသော ကုန်းကြော တခုကို လျှောက်၏။ ဆင်းလိုက် တက်လိုက်ဖြစ်ပါသည်။ မြို့သို့ဝင်ရန် မဝေးလှတော့သည်ဖြစ်ရာ ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်သာ လျှောက်ကြ၏။
နေသည် ပူလှ၏။ ရေတံခွန်ကုန်းတွင် ရှိစဉ်က အေးချမ်းမှုရှိသော်လည်း ယခုအခါ ချွေးဖြိုင်ဖြိုင်ကျနေ၏။ ဆက်လက်ချီတက်၏။ နေ့လည် (၁၂) နာရီတွင် ခဏနားကြသည်။ (၁၂) နာရီခွဲတွင် City of Ihaca ဆိုင်းဘုတ်ကို ကျော်ဖြတ်သည်။ တောင်နံရံတွင် ရေတံခွန်အသေးစားလေးတခုသည် ပုန်းကွယ်၍ စီးကျနေ၏။ မြို့အဝင်ကို ကျောက်ကျစမ်းနှင့် ကြိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားသောအခါ Allen H-Treman Stat Marine Park ပန်းခြံကို တွေ့ရသည်။ စည်ကားသိုက်မြိုက်လှ၏။ ပန်းခြံတွင် ရေဆိပ်တလျှောက် အပျော်စီး မော်တော်ဘုတ်များဖြင့် ပြည့်နေသည်။ အရီးတို့ရွာအဝင်သည် ကုက္ကိုလ်ပင်နှင့် တမာပင်နှင့်ပမာ။ ရေကြည်စမ်း နှင့် မိုးမခလမ်းဖြစ်ပါသည်။
မိုးမခအရိပ်တွင် နားကြ၏။ ဤနေရာမှကြည့်သော် မြို့တဖက်ထိပ်တွင် Ithaca College တောင်ကုန်းကို လှမ်းတွေ့နေရသည်။ နားရင်းဖြင့် မြို့ခံအဖွဲ့ကို စောင့်ကြ၏။ ကိုအောင်ဝင်းနှင့် အရှည်ကြီးတို့ နေ့လည်စာကို ဆောင်၍လာသော် ခပ်လှမ်းလှမ်း ကားရပ်ရာနေရာတွင် မန်ကျီးပင်နှင့်တူသော အပင်၏အရိပ်၌ စားကြသည်။
ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့သည် ကားဆိပ်တွင် စောင့်နေကြမည်ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြောင်းကြားလာမည့် အချိန်ကို စောင့်နေကြသည်။ ထိုသို့စောင့်နေကြစဉ် အားကစားလုပ်သော အဖွားကြီးတဦးရောက်လာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမအကြိမ် တိုးရစ်ဖိတ်ခေါ်ကတည်းက ရောက်ဖူးကြောင်းပြောပြသည်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ ဆိုးသွမ်းလှကြောင်းကိုလည်း ပြောပြသည်။
မကဒတ ဥက္ကဌဟောင်း ကိုထွန်းအောင်ကျော် ရောက်လာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ခရီးရှည်အဖွဲ့သည် မြို့တွင်းသို့ ဆက်လက်ချီတက်ကြ၏။ အလံတလူလူဖြင့် ဆိုင်းဘုတ် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ကိုင်ဆောင်၍ ချီတက်လာလျှင် ပြည်သူအများ အားပေးနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ရေလှူပါသည်။ အဆာပြေစားရန် သစ်ကျားစေ့ ပေးသူလည်းရှိသည်။ ကားဆိပ်သို့ရောက်လျှင် မြို့ခံအဖွဲ့က Welcome to Ithaca ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ကြိုဆိုနေ၏။ လမ်းလျှောက်မောင်များကိုလည်း ပန်းကုံးများစွပ်ပါသေးသည်။
လူတန်းကြီးသည် စီတန်းလိုက်သော် ရှည်လျားသွားလေ၏။ ကားဆိပ်မှတဆင့် မြို့လယ် Commons သို့ State လမ်းအတိုင်းချီတက်ကြသည်။ လူအများသည် အထူးအဆန်းကို ကြည့်နေကြ၏။ (၃) နာရီ (၅) မိနစ်တွင် Ithaca မြို့၊ လမ်းအပေါင်းဆုံရာ မြို့လယ် Commons တွင် ရပ်နား၍ စုဝေးကြပါသည်။ Jeffrey က တောက်လျှောက် မှတ်တမ်းတင်နေ၏။ လူစုံသည်။ ကိုအောင်ဝင်း၊ ကိုမင်းထွေး၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ အရှည်ကြီး တို့က အခမ်းအနားအပြင်အဆင်ကို အရေးပေါ် ဖန်တီးနေကြသည်။ ကိုခိုင်ဝင်း၊ ကိုအောင်ကြည်ဦး၊ ကိုအောင်ဖြိုးဆွေတို့က လက်မှတ်ထိုးရန်စာရွက်များဖြင့် ကောက်ခံနေသည်။
လူတိုင်းသည် သူ့တာဝန်နှင့်သူ အလုပ်ရှုပ်နေကြ၏။ ရောက်ရှိနေသော သတင်းမှတ်တမ်းအဖွဲ့ကလည်း လှုပ်ရှားမှုများကို မှတ်တမ်းတင်နေသည်။ Commons သည် လူမျိုးစုံ၊ ကိစ္စမျိုးစုံတို့ဖြင့် စည်ကားနေ၏။ ဤအဆောက်အဦကို ရရှိရေးမှာ အသည်းအသန်ဖြစ်၏။
ဤသို့အလုပ်ရှုပ်နေကြစဉ် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်အကြောင်းကို မေးမြန်း၏။ သူသည် နယူးယောက်မြို့ အဆောက်အဦရှေ့တွင် မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်ရင်း အဖမ်းခံခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည်။ ပေတေကုတ်ကပ်ပြီး မထတမ်း ထိုင်သပိတ်ဆန္ဒပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရဲအရာရှိရောက်လာပြီး အဖယ် ခိုင်းသော်လည်း မဖယ်ဘဲထိုင်နေသဖြင့် အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူအမည်မှာ Tom Fox ဖြစ်၏။ သူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလွန်လေးစား၏။ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တူသူ ခေါင်းဆောင်တယောက်မျှမရှိဟုဆို၏။ Gandhi ၏လမ်းစဉ်၊ Gandhi ၏အမွေကို ဆက်ခံသူအဖြစ် ကမ္ဘာတဝှမ်းကျော်ဇောသူဟု ပြောပြသည်။
အခမ်းအနားမစမီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ပြုသောသီချင်းကိုဖွင့်ထား၏။ ထိုနောက်ကြွေးကြော်သံဖြင့် အစပျိုးသည်။ အလေးပြုခြင်း (၃)ရပ်ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်၏။ ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော်က မိတ်ဆက် ပြောကြားပြီးလျှင် ခရီးရှည်အဖွဲ့အကြောင်းမိတ်ဆက်၏။ ခရီးရှည်အဖွဲ့၏တာဝန်ခံဖြစ်သော ရဲဘော်မောင်မောင်တိတ်က ရှေးဦးစွာပြောကြားသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် Ithaca ကွန်မြူနီတီမှ ကိုအောင်ကြည်ဦးပြောကြားသည်။ ထိုနောက် ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ၎င်းနောက် ခရီးရှည်အဖွဲ့မှ ရဲဘော်မင်းဆွေဦး၊ အလက်ဇန္ဒား၊ မော်ရာစတီဖင်၊ ဂျက်ဖရီ တို့ ပြောကြားကြသည်။
ဤအခမ်းအနားတွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်းထံတင်ပြမည့်စာအတွက် ဖြတ်သန်းသွားလာ နေသော ပြည်သူလူထုထံ လက်မှတ်ကောက်ခံရာ လက်မှတ် (၁ဝဝ) ကျော်ရရှိသည်။ ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းဖြင့် လက်ချင်းချိတ်၊ ဝိုင်းကြီးဖွဲ့၍ သီဆိုကြကာ ညနေ (၅) နာရီ (၂ဝ) မိနစ်တွင် အဆုံးသတ်လိုက်ကြ သည်။
Posted by Long Marech for freedom at 8:39 AM
I do not understand your language, but seeing the photos I understand that you are struggling for freedom and equal political participation of your great leader Aung San Suu Kyi. Beingaforeign observer, I empathize with you.
When I was very young in my country, I used to hear of the great people and country of Burma (now Myanmar). I hope and pray that soon one day your country will be free and fair to all its inhabitants.